� DOOD: Soomaaliya waxay tijaabisey xorriyad (kahor 1884), kaddib waxaa lagu khasbay gumeysi ilaa 1960, kaddib waxay tijaabisey dimoqraadiyad (1960-1969), kaddib xukun militari iyo shuuciyad (1969-1991), kaddib dagaal ahli ah iyo dawlad la'aan. Ma tahay hadda in loo noqdo xukunka iyo dastuurka Islaamka, qoraalka ku soo aadi Halkan
SHIRKA NAIROBI MA SOCN LAHAA WAX KABAD HAL SANO HADDII SOOMAALIDA LOOGU DEJIN LAHA ADASTUUR ISLAAMI AH?
AXDIGA KUMEEL GAARKA EE SOOMAALIDA LOOGU DEJIYEY NAIROBI
DASTUURKII KUMEEL GAARKA AHAA EE SOOMAALIDA LOOGU DEJIYEY CARTA
Ra'yigaaga ka dhiibo...
Illaah baa mahad, leh nabad gelyo iyo naxariis Eebe korkiisa ha ahaato midka ugu sharfanaa uguna danbeeyay Rususha iyo Nabiyada Eebe Muxammed(nnk).
Su'aasha ah in shareecada Islaamka Soomaaliya lagu maamulo, waa su'aal aan meesha oolin, oo maba isweydiin karno, waxaana su'aashan isweydiin karnaa ama uu boos nooga banaanaan karaa su'aal sidan oo kale ah baan u maleynayaa, haddaan nahay dad 50% ama 30% Islaam ah.
Illaahna sidaa inagama dhigee, ee dad 100% Islaam ah, in shareecada Islaamka lagu maamulo in la su'aalo maba aha.
Waa jiraan qaybo yar oo inaga mida oo la marin habaabiyay amaba soo barteen mabaadii' uu aasaasku ka qaldan yahay, inay ka didaan maqalka shareecada Islaamka oo la isku maamulo.
Xaqiiqdu siday tahayse maanta waa halka nalaka haysto, illeen waxaan aaminay oo raacnay shuruuc ay dajiyeen kuwo aan waxba ka ogeyn aadanaha samaantiisu iyo xumaantiisu waxay ku jirto. Waxaana anigu aaminsanahay kuwan ka carara shareecada Islaamka inay rabaan uun in ay hawadooda iyo hungurigooda u noolaadaan, oo ayan dan ka lahayn inta kale ee ay dhibaatadu ka soo gaarayso mabaadii'da ay wataan, oo kuli uu dhib ugu sugan yahay dadka ay doonayaan inay mabaadii'daa qaldan ku maamulaan, ahna mushkiladaha aan xalismeynin ee maanta jira oo nooga muuqda waddamadda raaca mabaadii'daa.
Aniguna fursadaan aan u helay ka hadalka shareecada oo la isku maamulo, ayaan rabaa inaan soo qaato meel aan u arko inay ugu weyn tahay oo nalaka soo galay, oo mashaakil oo dhan naga soo waajahayo. Tan ugu weyn ee naloo kugu soo gabaday waa dumarka oo markii ay darseen cadawyada Islaamku sharafta iyo qiimaha uu Islaamku siiyay qafta dumarka ah ayay rabaan inay sharaftaa ka xayuubiyaan oo meel cidlo ah soo istaajiyaan ayadoo qaawan, iyagoo u tusinaaya in shareecada Islaamku dumarka dib u dhigayso, oo ay dusha danbe ee guriga ku soo xireyso, ayna xakameyneyso xoriyadaheeda oo dhan, u ogoleyn dibad u baxa, xijaab u galinayso,ayan lahayn xoriyad hadal ama fikradeedba iwm. Kuwaasoo kuli ah been been iyo wax la buun buuninayo, oo inanta caaqisha ah ee caqiidadeeda aan culeys iyo caburin u aragi fahmayso, oo in yar oo dibad buxu la fiican yahay dhib u arkayaan waxa shareecada Islaamku qabto.
Dumarkana markuu noo sifeynayay Rasuulkeenii Suubanaa(nnk) uu ku sifeeyay wixii laga abuuray, oo ahaa feercalaantii Nabi Aadam(nnk). Feercalaana waan wada naqaanaa, waa laf yar oo jilicsan oo qaloocan, oo hadduu mid isku dayo inuu toosiyo uu jabinayo uun oo ayan u suurtoobeyn, hadduu jabinteeda rabana ay aad u fududahay. Dumarkuna uu sidaa la mid yahay
oo haddii wax walba oo samaana iyo wanaag aad la doonto, ay haddana yihiin kuwo u dabacsan xumaanta iyo lugooyada, oo si fudud loo marin habaabin karo, ayna wax walba u laab furan yihiin, ayna ka fiirsanba. Qaarbaa waxay u qaadan karaan halkan inaan ku weerarayo dumarka kuma weerarayo ee waa xaqiiqdii.
Bal haddana dhagaysta waxa uu na faray midka aan nafsadiisa hawadeeda ku hadlin, ee waxyi ku soo dega ku hadla Rasuulkeenii Suubanaa(nnk)
AYAAN DARRADA AYAAN
"DUMARKU WAA WALAALAHA RAGGA"
"DUMARKA U DARDAARMA KHEYR"
Xaqiiqdii ma jiro maanta xeer ama qaanuun ay qaateen dadku oo sidan u dhowra xuquuqda dumarka, siinayana darajadaan, in dumar oo dhan walaalaheen yihiin(marka laga reebo inta uuna xarigu noo qaban). Ayna dumar oo dhan noqdeen walaalihii raga.
Majiro mid raba in walaashii la ihaaneeyo, ama la xumeeyo oo xurumaadkeeda lagu xad gudbo, oo mid walba wuxuu ka dhiidhiyaa dhibaatada loo geysto walaashiis. Marka yaad xumaan u geysataa haddii dumar oo dhan walaalahaa noqdeen. Tana waa mida maanta u ami la' shabeel naagoodyada* doonaya inay dibad u baxa dumarka ku dubtaan.
Waxaad jeceshahay inaad wanaag oo dhan u dardaaranto walaashaa, oo aad uga digto meel walba oo dhibaato ka soo gaareyso.
Waxaana xasuustaa waano uu nin adeerkeey ah siin jiray gabdhihiisa, aniga oo inan yar ah, markaana ma aan fahmeynin waxa uu ka watay, balse ii cadaatay markuu caqligeygii koray oo ahayd
"Raggu waa tukee iska ilaaliya, oo haddaadan tuurina hilibkuu idiin kala tagaa"
Oo sida caadada ah tukuhu korkaasuu duul duulaa halka hilibka lagu qalayo, hadduu waayo wax eryana, wuxuu ku soo degaa meel aad tuuryada kala gaarto, oo haddaadan tuurin wuu soo dhawaadaa, ilaa uu hilibka ku soo dhaco, oo maxaa dhiman mar hadduu hilibka kaala tago. Marka haddaan dumarka u dardaarano kheyr halkee naloo kugu soo gabanayaa.
Balse diide shabeel naagoodyadu midaa oo waxay wax walba oo ay u rabaan maanta xayeysiin hormuud uga dhigeen dumarkii, xayeysiintaan inan quruxsan ayan ku gaaf wareegeyn xayeysiin looma arko, xaafiiskay inan xaragoonaysa xarunta u fadhinina xaafiis maba aha, oo soo dhaweyni meel walba oo ay ahaato, waa in inan cod macaanoo, muunad iyo muuqaal leh ku soo dhaweysaa. Marka midkee baan walaashiis waxa kan oo dhan uga digeen inay iska ilaaliso. Waxaanoo kuli u fududeeyay shabeel naagoodyadii ugaarsiga, oo markuu helo fursad daqiiqada oo ay kula kaliyoowdo inantu ayuu been u dhuraa, uuna u daadsadaa dabintiisa, ayana ay si fudud ugu soo dhacdaa ileyn waa mid u nugul in dibad u baxa lagu cunee.
Ilaahna uu uga digay dumarka farayna inay iska ilaaliyaan dibad u baxa
"Kuna sugnaada guriyihiina, hana u wareegaysanina(idinkoo isfeydi) sidii jaahiliyadii horeeyasay"
Qur'aanka Kariimka ah Surat Al-Axzaab aayada 32.
Waana waxa dhibaatooyinka maanta caalamka ka jira u xalismi la' yihiin, uuna u qiimo beelay dumarkii wadamadda dibad u baxa dhiiro galiya, oo ogolaaday isdhexgalka raga iyo dumarka, taasoo qof walba oo caaqila u muuqata, ilaa uu yahay mid ogol ugaarsiga dumarka maahee.
Uuna Ilaah ugu sii cadeeyay faa'idada xijaabku u leeyahay dumarka, oona ah inaan la aqoonsanin.
"Nabiyoow ku dheh haweenkaaga iyo gabdhahaada iyo haweenka Mu'miniinta isku dada shukooyinkiina, taasoo idiinku dhaw in laydin aqoonsado oo laydin dhibine"
Quraanka Kariimka ah Surat Al-Axzaab aayada 59
OO inantu haday wajigeeda qarsato way ku adagtahay shabeel naagoodku inuu aqoonsado ama isku dayo inuu dhibo, oo markuu arkayo wuu aabeeyaa maalin walba, ilaa uu ka helo halka ay u nugushahay, oo halkaa ayuu ka soo galaa. Ee hadday iska shareerto yuu ku shegaa waa tii fanaankii Soomaaliyeedi uu lahaa
shaydaan aan la arkeynin, waa naag shaadir hagoogatay, oo indhaha soo shareeratay, oo shaambinaysa agtaada, ee yaad ku sheegi lahayd!
Walaalaheey sheydaan kuma sheegi karo, ee halkaan waxaan u soo qaatay ereyadaan. Yuu ku sheegi lahaa shabeel naagoodku inantan shaadirka hagoogatay, oo indhaha soo shareeratay?
Ilaahna uu noo sheegay waxa ay uga badbaadi karto qofta dumarka ahi, inta niyada ka bugta ee ragga ah oo ah.
"Hadalka ha nugleynina oo uu damco midka qalbiga ka buka"
Quraanka Kariimka ah Suurat Al-Axzaab aaayada 32
Rag oo cod dumar oo dabacsan maqlaa durba wuxuu u degdegaa inuu dareenkeeda soo jiito, oo uu u diyarsado wax walba oo uu ku soo xero galin karo.
Gabagabadii Islaamku qof walba muhiimad u gaara ayuu siiyay, dumarkuna waa hooyooyinkii hoyga uu horumarkeenu ku jiro, oo ayagoo habsan u qaata hanuunkii Eebe oo ku hogaansamaan, heer sare ku gaarnaayoon heybad ku yeelanaa. Taasna waxaan ku heleynaa inaan walaalaheen u dardaarano kheyr, oon kala dagaalano horarka u horseedaya inuu hugeedii ka tuuroo, halka cidlada ku cuno
Faafin: SomaliTalk.com | Nov 29, 2003.